ချစ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်. ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီမွေးနေ့ပွဲအတွက် ထောင်သောင်းချီတဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းသံတွေကိုကြားရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲအံ့သြ၀မ်းသာမိပါတယ်!
ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်းက သန်းနဲ့ချီတဲ့ အရောင်းအ၀ယ်သမားတွေကို အကျိုးရှိအောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အချိန်တွေတိုင်း နာရီတွေတိုင်းမှာ ဂုဏ်ယူနေမိပါတယ်. ဒါကြောင့်ပဲနဂိုစီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ ဆုလက်ဆောင်အရေအတွက်ထက်ကို ပိုပြီး ဖောက်သည်တော်တို့ကိုဆုလက်ဆောင် ၉သိန်း၃သောင်း၂ထောင်တိတိဆုလက်ဆောင်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်. ဖောက်သည်တော်တွေကို တကယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့ စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့အခုလိုဆုလက်ဆောင်တွေ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်!
ဖောက်သည်တော်တွေအားလုံးက FBSနဲ့အတူဆက်ရှိပြီး နောက်နှစ်ကုမ္ပဏီ ၉နှစ်ပြည့်ကိုလဲအတူတူဆင်နွှဲခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်! ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရောင်းဝယ်ပြီး သင်တို့အတွက်နောက်ထပ်စီစဉ်ပေးသွားမယ့် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါနော်.